कतै तपाईंको मोबाइलमा यी एप त छैनन्? बेलैमा हटाउनुस् है, गुगलले हटाउन भनिसक्यो - Everest Dainik - News from Nepal
कतै तपाईंको मोबाइलमा यी एप त छैनन्? बेलैमा हटाउनुस् है, गुगलले हटाउन भनिसक्यो
गुगलले प्ले स्टोरबाट दुई लोकप्रिय एप्स हटाएको छ । गुगलले यी दुबै एपमा मेलिसियस कोड भेटिएको भन्दै यस्तो कदम चालेको हो । गुगलका अनुसार ती एपमा पाइएको मेलिसियस कोडले एडवेयरको जस्तो काम गर्ने गर्दछ ।
यसका स्थाई गुगलले आफ्ना सबै प्रयोगकर्तालाई चाँडोभन्दा चाँडो यी एप हटाउन भनेको छ । विश्वका प्रयोग हुने स्मार्टफोनमध्ये ७६ प्रतिषभन्दा बढीमा गुगलको एन्ड्रोइड ओएस प्रयोग भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस खबरदार! यी सात एंड्रोइड एप बिर्सेर पनि नगर्नुहोला इन्स्टल
यसरी खतरनाक भनिएका दुई एपहरूमा सन ब्युटी क्यामेरा प्रो र फनी स्वीट सेल्फी क्यामेरा रहेका छन् । यी दुवै निकै लोकप्रिय एप्लिकेसन रहेको र दुवैले पप-अप एडका मध्यमले निकै पैसा कमाइरहेको बताएको छ ।
गुगलले यी दुवै एप ब्याक ग्राउण्डमा चलिराख्ने भएकोले यसले फोन स्लो चल्ने र तात्ने जस्ता समस्या देखिन थालेको बताएको छ । यसले प्रयोगकर्तालाई फोन चलाउन समस्या हुने तथा ब्याट्री समेत छिटै सिद्धिने बताइन्छ ।
याे पनि पढ्नुस छ महिनापछि अवैध मोबाइल नचल्ने
गुगलले प्रयोगकर्तालाई यी एप अनस्टाल गर्न भनेको छ । मोबाइल सुरक्षा फर्म वन्डेरामा अनुसार दुवै एपमा नचाहिएका विज्ञापन बाहेक थुप्रै खतरनाक कोडहरू पनि रहेका थिए । दुबै एपले अरु अनुमतिसँगै अडियो रेकर्ड गर्ने अनुमति पनि माग्ने गर्दथे ।
गुगलले प्ले स्टोरबाट एप्लिकेसनहरू हटाएको यो पहिलो पटक भने होइन । केही दिन अघि मात्रै अर्को लोकप्रिय एप क्याम-स्क्यानरलाई पनि धेरै मेलिसियस कोड रहेको भन्दै हटाएको थियो । क्यामस्क्यानरले यस समस्यालाई समाधान गरेपछि गुगलले यसलाई पुनः प्रकाशित गरेको थियो ।
हालका दिनहरूमा गुगलले प्ले स्टोरकालागि एप्लिकेसन विकासकर्ताहरूका लागि केही कडा प्रतिमान बनाएको छ । नयाँ नियम अनुसार नयाँ एण्ड्रोइडएप्लिकेसनलाई प्लेस्टोरबाट स्वीकृति मिलन कमसे कम तीन दिन लाग्न सक्छ । यस अघि एप विकासकर्ताहरू सोझै प्ले स्टोरमा प्रकाशित गर्ने गर्थे ।